राति का,मु’क सपना देख्नुहुन्छ? यस्ताे हुनसक्छ कारण:: Naya Nepal
राति का,मु’क सपना देख्नुहुन्छ? यस्ताे हुनसक्छ कारण
राति सुतेपछि हरकोहीले बेलाबेला सपना देख्छन्। कसैले बिहान उठ्दा सपना सम्झिन्छन् भने कसैले बिर्सिन्छन् ।तर देख्न चाहिँ सबैले सपना देख्छन् नै ।मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार हामीलाई रातभरि सपना आउँदैन तर एक खास समयमा भने पक्कै आउँछ । त्यतिखेर हाम्रो मस्तिष्क सपना बुन्नमा व्यस्त हुन्छ ।
किन आउँछ का,मु’क सपना ?
केही मान्छे शारीरिक सम्पर्कका बारेमा हरदम सोचिरहेका हुन्छन्। शारीरिक सम्पर्क गर्ने हिम्मत नभएका यस्ता मान्छेले मनमा कुरा दबाएर बसिरहेका हुन्छन् ।युवाहरूलाई शारीरिक सम्पर्कको सपना आउनु आश्चर्यको कुरा हैन तर बुढाबुढीलाई समेत यस्तो सपना आउन सक्छ । शारीरिक सम्पर्कको सपना उमेर बढ्दै जाँदा झन् झन् आउँछ । अत्यधिक रचनतात्मक मान्छेलाई पनि शारीरिक सम्पर्कको सपना आउँछ ।
पूर्वप्रेमीसँग शारीरिक सम्पर्क गरेको सपना
तपाईंले नचाहे पनि पूर्वप्रेमी वा प्रेमिकासँग शारीरिक सम्पर्क गरेको सपना तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार प्रेमीहरू भूपू भएपनि सपनामा त उनीहरू आफ्नै हुन् नि भन्ने सोच व्यक्तिमा निहित हुन्छ । उनीहरूसँगको पुरानो याद अचेतनमा रहिरहेको हुन्छ ।
हाकिमसँग शारीरिक सम्पर्क
जनावरसित शारीरिक सम्पर्क
शारीरिक सम्पर्क जो वा जेसँग पनि गर्न मन लाग्छ मान्छेलाई । बिजुलीको पोलदेखि सडकको खाल्डोसम्मलाई नछोड्ने मान्छे पनि भेटिन्छन् । कसैकसैलाई जनावरसँग से,क्स गरेको सपना आउन सक्छ । यस्तो सपना आउने मान्छे आफूमा मानसिक समस्या छ कि क्या हो भनेर आत्तिन सक्छ । तर मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार दामी सेक्स गर्न मन भएका मान्छेले जनावरसँग से,क्स गरेको सपना देख्छन् ।
कलाकारसँग शारीरिक सम्पर्क
एलियनसँग शारीरिक सम्पर्क
कहिलेकाहीँ हाम्रो सपनामा एलियन आउँछन् र हामी उनीहरूसँग क्री,डा गर्छौं । हैन हामीले के गरेको यो जस्तो पनि लाग्छ । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार शारीरिक सम्पर्कमा रोमाञ्चको चाहना गर्नेहरू यस्तो सपना देख्छन् ।